Mpaghara Casino Online na Icelandic - Codes Bonus Casino Online
Online cha cha Daashi Codes > Site na Online Casino Sites Icelandic
Loading ... Iwu nke ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Iceland gbochie ọrụ ndị ọrụ na ịgba chaa chaa. A machibidoro ịgba chaa chaa na mba ahụ, ma na casino na ala na Internet. Ihe ndị ọzọ na-eme bụ ụlọ ọrụ nke Mahadum Iceland. Okwu nke ịgba chaa chaa a na-atụle ugboro ugboro site n'aka gọọmenti. Otú ọ dị, ọ dịghị mgbanwe dị mma a ga-atụ anya ka ndị egwuregwu nwee ike ịbịaru oge. Ọ bụ ezie na a ghaghị icheta na ịnweta ịgba chaa chaa n'ịntanetị ga - enyere aka wepụ ngwa ngwa na nke ọma site na nsogbu ego nke mba ahụ. Ka ọ dị ugbu a, egwuregwu na ntanetị n'ịntanetị na ndị na-egwu egwuregwu na Iceland na-achọta ọhụụ ma jiri ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ.
Ndepụta nke Top 10 Icelandic Online Casino Sites
Ịgba chaa chaa na Iceland
Na January nke ugbu a na-agba chaa chaa 2017 iwu na Iceland, ma e wezụga lotteries na ọrụ ịgba chaa chaa ndị ọzọ nke òtù ndị na-abụghị ndị na-enweta ego malitere. Nanị ọrụ njikwa nke ịgba chaa chaa bụ University of Iceland Lottery. Nzukọ a nwere ọtụtụ igwe oghere, nke iwu kwadoro na 1994, na nso nsobe ụlọ na gas.
Egwuregwu saịtị na saịtị na-anabata ndị si Iceland
Hụ ndepụta nke ebe ntanetị nke ịntanetị na-anabata ndị si Iceland, ma na-enye egwuregwu dị elu ma dị mma. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche site na ntinye oghere na egwuregwu ndị na-ere chaa chaa na-ere site na ndị na-ere ihe dị otú a dị egwu NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Egwuregwu Egwuregwu, na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwekwara ike gụọ nyocha anyị banyere saịtị ntanetị n'ịntanetị, iji mara ọkwá kacha mma n'ịntanetị, ụgwọ ego na nhọrọ ịkwụ ụgwọ ndị dị na ndị Iceland.
Dị ka otu nnyocha na-adịbeghị anya na KeyToCasino saịtị, egwuregwu ahụ na ụlọ ịntanetị na-adịghị ahụ maka ihe karịrị 50% nke ọnụ ọgụgụ dum nke iwu ụwa nke mba ha. O wee pụta na inweta ịgba chaa chaa na Ịntanetị dịgasị iche iche site na steeti ruo na steeti. Mgbe ụfọdụ na mba ụfọdụ amachibidoro ụdị ihe ọ bụla nke casinos n'ịntanetị na ntuchi ndị ọzọ na-emetụta nanị ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa dị n'ógbè ahụ ma ghara itinye aka na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
A na-eme nnyocha ahụ site n'ịchịkọta na ịmụ iwu nke ndị casinos na ebe nrụọrụ weebụ na 225 gburugburu ụwa na ọmụmụ nke ihe ọmụma nke asụsụ 46 dị iche iche. Enwere ike ịchọta isi mmalite, dịka saịtị nke ụlọ ọrụ gọọmenti na mpaghara na ndị na-agbakwụnye mgbasa ozi n'ógbè ahụ. N'ihi ya, nchọpụta ahụ kpuchiri 95% nke mba, na 98% nke ndị mmadụ.
Banyere nchọpụta casinos dabeere na ala kpughere na a machibidoro ha iwu ma ọ bụ machibidoro ha na mba 74, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na 151 bụ iwu zuru oke. Ma na casinos online ka ọnọdụ dị iche:
A machibidoro ịgba chaa chaa n'ịntanetị na mba 39.
32 na-enye iwu ka a machibido ọrụ nke ndị na-arụ ọrụ n'Ịntanet na casinos, ma ọ bụghị.
Mba 61 kwere ka ịgba chaa chaa na Intanet, mana ọkara n'ime ha iwu na-emetụta naanị ụlọ ọrụ ndị obodo. Dịka dị na paragraf ahụ dị n'elu, iwu nke mba ndị a adịghị achịkwa ikikere n'ọkwá ndị ọzọ.
93 na-ekwu na ị machibidoro ya, ma ọ bụghị ụlọ ọrụ ịntanetị nyere ikikere.
N'ozuzu, mgbochi ịgba chaa chaa n'ịntanetị na otu ogo ma ọ bụ ọzọ dị na mba 132, nke na-ede maka 56% nke ndị bi n'ụwa.
Ya mere, olee ihe na-echere maka ndị nkịtị, ndị kpebiri ịnwale ohere ha na weebụ? Ndị na-egwu egwu na mba 25 ga-akpacha anya nke ọma ma mara ihe ha na-eme, n'ihi na ha na-ebuso ndị omempụ aka maka egwu egwu n'ịntanetị. Na obodo 15, ọ nwere ike ịnye ntaramahụhụ ntụziaka, ndị bi na 92 mba nwere ike igwu egwu - maka ha ọ bụghị na ihe ize ndụ.
Nọgide na-achụ ndị nnyocha nyocha enyochala nkwekọrịta maka inye nke ụlọ ọrụ 655 maka ụlọ ọrụ online n'ihi na ọnụnọ ọnụnọ maka ndị bi na-amachibidoro ịnye ọrụ. Mba ndị agha Troika nke na-eduga iwu maka ụmụ amaala ya bụ: United States (72% ban online casinos), France (70%), Israel (54%). Mba atọ kachasị elu na njedebe kasị elu nke nkwụsịtụ bụ Iceland (7%), New Zealand na Australia.
Iji ghọta, olee àgwà ndị nwe obodo na ịgba chaa chaa n'Ịntanet na ọtụtụ ịgba chaa chaa n'Ịntanet ka a machibidoro ịkpọ ndị bi na mba a, ọmụmụ ahụ mere ka ọnụ ọgụgụ nke mba na ógbè 225 dabere na atụmatụ nke ịgba ọsọ ịgba chaa chaa ( Egwuregwu Ịgba Chaa chaa). Ọnụ ọgụgụ kachasị na ọnụ ọgụgụ nke nyocha a bụ 1,000 nke 500 jikọtara na pasent nke niile maka ndị bi na online casinos nke mba ahụ na 500 ọzọ bụ atụmatụ nke ụkpụrụ obodo nke casinos na ala. Nke a na-agụnye akụkụ dịka onye ọrụ nchịkwa / nchịkwa ọrụ dị na ịgba chaa chaa n'ịntanetị na nnyefe ego n'etiti cha cha na onye ọkpụkpọ.
N'elu elu ugwu ndị dị na Chile, Andorra na Venezuela, bụ ndị na-emetụta 960 isi ihe. Na ala nke ọnụahịa ahụ weghaara France (412 isi), Iran (407) na US (311). Russia nwetara 686 isi, ogo 173 na ndepụta nke 225 mba.
0.1 Ndepụta nke Top 10 Icelandic Online Casino Sites
2.1 Ịgba chaa chaa na Iceland
2.2 Egwuregwu saịtị na saịtị na-anabata ndị si Iceland